AbakwaSony basandula ukuveza iziphumo zabo zemali kwaye amanani abo amangalisa. Kwaye inkampani yaseJapan ikwazile ukuthengisa nto ngakumbi kwaye akukho nto ingaphantsi kwayo 7.4 yezigidi ze-smartphones kuluhlu lweXperia.
Inani eliphantsi kakhulu ukuba siyalithelekisa isilwanyana saseKorea, kodwa ukuba sithathela ingqalelo ukuba kwikota enye yonyaka ophelileyo i-3.5 yezigidi zeeterminal zathengiswa, impumelelo inkulu.
Ngokwenkampani i Sony xperia s iye yaba yiflegi entsha ngokweentengiso kodwa ulwahlulo lwentengiso olwenzileyo, olusungulayo Iimpawu zeSony Xperia nge-Android ngamaxabiso anomtsalane kakhulu, kuye kwaba sisiphumo sempumelelo emangalisayo yenkampani.
Ukuthetha ngamanani ezoqoqosho, USony ukwazile ukwanda nge-132,9% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, efikelela kwizigidi ezingama-3.615 zeerandi. Ewe kunjalo, inkampani iyaqhubeka nokulahleka i-356 yezigidi zeedola, ibangelwa yi ukufunyanwa kwesabelo sikaNokia.
Ngayiphi na imeko, ezi ziphumo zibonisa ukuba uSony ukwazile ukulungisa ikhosi kwaye wasinda kukunyuka kwe-Samsung, inkampani engayeki ukukhula kwaye etshabalalisa abo bakhuphisana nayo.
Ewe kunjalo AbakwaSony bazisusile iimpazamo kwinkampani yabo, egxile kakhulu kwisiphelo esiphakamileyo, kunye nokufika kwezixhobo ezinje ngeXperia P, zivumele ukuthengiswa kwayo ukuba kujike. Ilungele uSony!
Iinkcukacha ezithe xaxe - Izigidi ezili-9 ze-Samsung Galaxy S3 igcinwe, I-Sony Xperia S iya kuba nokhuseleko lwe-anti-smudge kunye nenkqubo yokutshaja ngokukhawuleza, U-Sony uthenga i-Ericsson isabelo sayo senkampani
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » U-Sony uthengise i-7.4 yezigidi ze-smartphones kwikota ephelileyo